सरोजकुमारी चौधरी - कान्तिपुर समाचार
हाट बजारमा ४१ देशका प्रतिनिधि
कल्पना गर्नुस्, तपाईं एउटा हाट बजारमा उभिनुभएको छ जहाँ विश्व बजारका अनेक सामान किन्न वा संसारका धेरै ग्राहकलाई आफ्नो सामान बेच्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँ तपाईं के किन्नुहोला ? वा के बेच्नुहोला ?
उनी बोल्न सक्दिनन्, न आवाजै सुन्छिन् । तर, संगीतको तालमा नृत्य र क्याटवाक भने अचम्म लाग्दो गरी राम्रो गर्छिन् । यही खुबीका कारण गुर्जुधारा, चन्द्रागिरि १२ बस्ने १६ वर्षीया सुजल बलमे हालै सम्पन्न एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा ‘मस्ट कन्फिडेन्ट’ अर्थात् सर्वाधिक आत्मविश्वासीको टाइटल हात पारेकी छन् । उनी मिस एन्ड मिस्टर एसईईमा उनी उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल भएकी थिइन् ।
झोलाले थिच्छ विद्यार्थी
के तपाईंका बालबच्चा विद्यालय जान्छन् ? जान्छन् भने तपाईंले कहिल्यै उनीहरूको झोलाको तौल ख्याल गर्नुभएको छ ? अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीलाई उनीहरूको पाठ्यसामग्री राख्ने झोलाका कारण हुने शारीरिक र मानसिक समस्याबारे जानकार छैनन् ।
चन्द समूहका विद्यार्थी नेता चिरञ्जीवी ढकाल अनामनगरबाट पक्राउ
नेपाल प्रहरीले युनियन हाउस अनामनगरबाट चन्द समूहको अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाललाई पक्राउ गरेको छ ।
भक्तपुरवासीको महत्वपूर्ण चाड अर्थात् प्रशिद्ध बिस्केट जात्रा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । आठ रात नौ दिनसम्म मनाइने बिस्केट जात्राको नवौं दिन बिहीबार दिनभर भक्तपुरका मठ-मन्दिरहरुमा पूजा गरी साँझ भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर जात्रा सम्पन्न गरिएको छ ।
सरोजकुमारी चौधरीका लेखहरु :
मौसम खराब हुने, तीन दिन सतर्क हुन आग्रह
मुलुकभर बुधबारदेखि तीन दिन मौसम खराब हुने जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सतर्क हुन सचेत गराएको छ । मेघ गर्जन, चट्याङ, गड्याङगुडुङ र असिनासहित वर्षा हुने विभागको अनुमान छ । महाशाखाले तीन दिनको मौसम प्रक्षेपण गर्दै पश्चिमी वायुको प्रभाव बुधबारदेखि थप सक्रिय हुने भएकाले देशैभर असर पर्ने बताएको हो ।
काकाकुल काठमाडौं [तस्बिरहरु]
'लिभिङ नो वन बिहाइन्ड' भन्ने नाराका साथ यो वर्ष २७ औं विश्व पानी दिवस मनाइएको छ। सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा हरेक वर्षको मार्च २२ का दिन विश्व पानी दिवस मनाइँदै आएको छ ।
हेरौं १८ तस्बिरमा फागू पूर्णिमाको उल्लास
रंग दल्दै आपसमा खुशियाली साटासाट गरेर मनाइने रंगै–रंगैको पर्व होलीको उमंग सुरु भएको छ । काठमाडौंको बसन्तपुरमा देखिएको फागू उत्सव हेरौं तस्बिरमा ।
भैंसेपाटीस्थित फोम गोदाममा आगलागी
ललितपुरको भैसेपाटीस्थित नख्खु डोलमा रहेको फोम गोदाममा आगलागी भएको छ । सोमबार दिउँसो भएको आगलागीमा गदाममा पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ ।
१५ औं अनशनको सम्झौता सांसदलाई बुझाउन जाँदा विवेकशीलका कार्यकर्ता पक्राउ
प्रहरीले विवेकशील नेपाली पार्टीका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । डा गोविन्द केसीको १५ औं अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौताको कपी लिएर संसद भवन जाँदै गरेका विवेकशीलका कार्यकर्तालाई प्रहरी पक्राउ गरेको हो ।